URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Novemba 2019	• 7 Comments
Kubalulekile ukuhlala uchaza indlela esebenza ngayo inkcaso ukuze ungabhukudi kwimigodi yokhuseleko eyakhiwe ngurhulumente. URobert Jensen kwiwebhusayithi yakhe jensen.nl izolo ubonakalise ukuba ulukhuni. Jonga ividiyo engezantsi kwaye ufumanise ukuba umdlalo udlalwa njani. Kwincwadi yam entsha ndicacisa yonke imiqolo yokukhohlisa, kodwa kubalulekile ukubona kumdlalo wenkcaso elawulwayo. Ukususela kumzuzu we-21e ungayibona indlela uJensen eneneni ambiza ngayo uDonald Trump njengomsindisi wehlabathi ngokuchasene ne-oda lehlabathi elitsha. Ndikhankanye le khonkco kwindlela yokucinga yokucinga kaDonald Trump kwinqaku elidlulileyo sele 'uphawu' (ukwakha uphawu).
Kuyacetyiswa ukuba ulifunde kwakhona eli nqaku, kuba ufumanisa ukuba ukucinga ngendlela enxibeleleneyo kunxulunyaniswa neestigma ezithile ezichazwe kakuhle kwintengiso efanelekileyo. Ndaye ndicacisa ukuba olu phiko lwele-ilungelo ('ekunene' ngesiNgesi) luya kuthi ekugqibeleni lugxekwe kububi yonke into edala uqoqosho olucwangcisiweyo.
Into yokuba uDonald Trump angahambisani nomyalelo wehlabathi elitsha kungenxa yokuba ungumlingisi oqeqeshiweyo (njengabo bonke abapolitiki), ngubani kuphela ngokuchanekileyo kwesi sizathu ukhetha lo msebenzi. Umsebenzi wakhe ukubeka uphawu ngokuqinisekileyo kwaye ngokucacileyo. Ibhanki ephakathi yaseMelika (i-FED) iye yaqinisekisa ukuba kukho ityala lokubhabha kwelexesha kwintaba yaseMelika. Le bhombu yenziwa isebenze ngexesha elifanelekileyo kwaye iya kuchaphazela umhlaba weNtshona kwi-chaos yezemali kunye neyentlalo. Ingxoxo nge-Brexit ikwasebenza ngendlela efanayo kwaye icwangciswe kwangaphambili. Oomama abanamaphiko namanenekazi kwezopolitiko ke aye afaka igalelo kulwakhiwo lwenqaku. Yindima yabo leyo. Indima yabo yokugqibela kukuba ibhloko lamandla eliza kubuyisela ucwangco ukusuka kolo luchaphazeleko lujongane ngqo nokugxekwa kwehlabathi, imbono yokuhlaziywa kwembali, izimvo zotshintsho lwemozulu kunye nayo yonke into enxulumene ngokusondeleyo naloo brand ilungileyo phantsi kwegama lethiyoriyali yegama. Msgstr ". Iphiko le-ezopolitiko elisecaleni ngoku ukukhonza ke eyona njongo iphakamileyo. Singaphawula okufanayo kubo bonke o "media bongezelelweyo" abanokunceda le brand itshiswe. Yiyo loo nto ndibiza inkcaso (elawulwa ngurhulumente). Banokubiza inyani eninzi, kodwa ungaze uyikhuphe loo mbono; babona emilenzeni, kodwa abaze batya phantsi kwayo.
Funda yonke into malunga nendlela odlalwa ngayo kunye nento onokuyenza ngayo, kum incwadi entsha.
Kutheni uTrump engeyena ochasene ne-globalist kodwa enye i-aristocracy pawn
tags: ben, UDonald, eziziimbalasane, je, Jensen, jensen.nl, uphawu, entsha, Robert, Rutte, ngexilongo, apho, ulungelelwano lwehlabathi
12 Novemba 2019 kwi-16: 59
UJensen uvunyelwe ngabo ukuba badlale umdlalo wenkcaso elawulwayo.
Yonke le nto ibiyinto yemidlalo yeqonga kangangeenkulungwane, kusithiwa zichasene enye kodwa zavumelana phakathi kwabo.
Ngumsi nezibuko. Ungazikhetha zombini
amaqhezu. Ngokufanelekileyo phakathi kwenkwenkwe yesikripthi nomnye umfana weskripthi. Zonke iindlela zisekhohlo, ekunene, ngasemva, njl, njl.
12 Novemba 2019 kwi-21: 24
"Ingxoxo ngeBrexit ikwasebenza ngendlela efanayo kwaye icwangciswe kakuhle kwangaphambili." ngokuchanekileyo, apho bafumanise le khabethe ilula ukuba ilungiselelwe ukuhambisa inqwelo. Ukuqhuba izinto eziya enzonzobileni ... Akuzange kuconjululwe ukuba bayakushiya ibhloko ye-EU NWO
UFarage apho igama lesiFrentshi i-RAVAGE limiselwe khona ngokungagungqiyo ... kwaye yiloo nto kanye eya kuba yiyo ... oui oui Je maintiendrai
Akukho kunqongophala kwabezopolitiko nakumajelo osasazo, ii-snipers kunye nezinye izixhobo ezingabonakaliyo
13 Novemba 2019 kwi-10: 42
uhlalutyo, ohlawulelayo umisela ukungabikho kokudibana.
13 Novemba 2019 kwi-12: 29
13 Novemba 2019 kwi-17: 53
Jonga nje 'iphaneli yobugcisa' ebonakalayo 'egreyibhileyo' emva kwakhe, ekuxelela ngokucacileyo ukuba usebenzela bani; )
13 Novemba 2019 kwi-18: 11
Into ecaphukisayo malunga nabadlali kukuba bahle kakhulu kuyo, inokukholelwa ukuba abantu bathuthela kwigadi.
Andiqondi ukuba kukho abantu abanokuthatha uJensen ngokungathi sína, kunamanqatha aphezulu, kutheni esoloko enxiba ii-headphones? Esinjani sona isiqhulo.
Ndiyakrokrela ukuba uJensen ujolise ekuthetheni neqela elincinci ekujolise kulo, kwaye ngenxa yoko upapashwa kwiYouTube.
21 Novemba 2019 kwi-13: 10
« Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.745.031
XanderN op Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI